Slides: Design Interaction, User Interface Design, User Experience Design | Martech Zone
Zoma, Oktobra 4, 2013 Alakamisy Oktobra Oktobra 3, 2013 Douglas Karr
Nijery ny tetikasa open source tena mahafinaritra aho anio alina nantsoina tsary izay ahafahanao miara-manjaitra ireo pejy HTML sy CSS amin'ny traikefa an-tsary izay miasa amin'ny sehatra rehetra. Miasa amin'ny fitaovana finday sy takelaka izy ireo (na ny manohana ny efijery mikasika na ny efijery feno aza). Ary ny slides dia tehirizina anaty Internet fa azo aseho ivelan'ny Internet ihany koa! Izy ireo koa dia mifangaro amin'ny Dropbox ary azo zaraina toy ny ataoko etsy ambany!
Ity dia solosaina tsara sy fohy Jamie Cavanaugh izay manazava ny fahasamihafana misy eo amin'ny Interaction Design (IxD), ny User Interface Design (UI) ary ny User Experience Design (UX). Ny fampitahana ny serealy, vilia ary sotro avy Ed Lea hendry.
Tags: Interaction DesignixdtsaryuiDesign Design an'ny mpampiasafamolavolana interface tsara ho an'ny mpampiasaux
Maninona ny Medium.com no manakiana ny paikadim-barotrao
4 Okt 2013 amin'ny 1:15 PM
Lahatsoratra manokana, Misaotra